हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जर अन्यौलमा - Aathikbazarnews.com हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जर अन्यौलमा -
नेपालका ठूला दुई बैंक हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जर हुन्छ हुँदैन त्यो समयले नै बताउने छ । तर हिमालयन बैंकमा करिब करिब १४ प्रतिशत प्रमोटर शेयर रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको असहमती बीच नै मर्जरको निर्णय गरेको भेटिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको चर्को दबाब पछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले यी दुई बैंक मर्जर गर्ने निणय गरेको एक सञ्चालकले पंक्तिकारलाई बताए ।
उनीले थपेः– गर्भनर अधिकारीकै दबाबमा हाम्रो बैंकको वित्तिय विवरणलाई नै स्वीकृत नगरेपछि हामीले बाध्य भएर मर्जरको निर्णय ग¥यो ।
एक अर्को प्रश्नमा उनीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने निर्णय भयो तर अब हुने विषेश साधारण सभाले मर्जर गर्ने कि नगर्ने निर्णय पनि गर्नु पर्दछ नि । जे सभावाट निर्णय हुन्छ त्यहि अनुसार हामी हिड्ने हो नि ।
अर्को प्रश्नमा उनीले थपेः– हाम्रो मेजर शेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि कुरा प्रस्ट छैन । उसले पनि त छानवीन गरिरहेको छ भनिएका छौं नि प्रस्ट भएर नआए कसरी मर्जर सम्भव छ त ? उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच हुने भनिएको बीग मर्जर हुने नहुने अझै निश्चित देखिदैन । भन्दा फरक पर्दैन ।
भनिन्छ कर्मचारी सञ्चयकोषले त छानवीन नै गरिरहेको छ । उसले पत्र लेख्दै मर्जर गर्न आफू तयार नरहेको बताएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लगातारको चर्को दवावकै कारण हिमालयन बैंकले मर्जर गर्ने बोर्डबाट निर्णय गरेको भएपनि अझै पनि विशेष साधारण सभा र कर्मचारी सञ्चयकोषको निर्णयले मर्जर हुने नहुने टुंगो लाग्ने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मर्जरमा कर छुट पाउने भएपछि हिमालयन बैंकको पाकिस्तानी लगानीकर्ता छिटो मर्जर गरेर शेयर विक्री गरि बाहिरिने उपाय खोजी रहेको छ भने राणा र पाँडे परिवार मर्जर पछि आफूहरुको मेजर प्रमोटर शेयर हुने र बैंक पारिवारिक तरिकाले चलाउने दाउमा देखिन्छ । तर, साना लगानीकर्ताहरु मारमा पर्ने प्रस्टै भएको एक सञ्चालकले दाबी गरे । तरपनि चर्को राष्ट्र बैंकको दबाब आएपछि वित्तिय विवरण रोकेर राष्ट्र बैंक नेतृत्वले धम्की दिएपछि हिमालयन बैंक बोर्डले मर्जर गर्ने निर्णय गरेको खुलेका छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
थापा सञ्चालक की राज्यलाई चुनौती दिने कांग्रेसी नेता ?
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं हिमालयन बैंकका राणा परिवारको शेयरबाट सञ्चालक बनेका सुनिल बहादुर थापले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत दर्जनौ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले शेयरमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने भन्दै हिड्नुले के सन्देश दिन्छ ? नेताले देशलाई घाटा हुने कुरा गर्नु कति उचित होला ? राज्यलाई ठगी गरेको कर तिर्नु पर्दैन भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्याममा प्रतिक्रिया दिने थापा सञ्चालक की कांग्रेसी नेता यसको उत्तर आगामी विशेष साधारण सभामा शेयरधनीले खोज्ने प्रस्टै भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
अब नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका कर्मचारीको तलब बढ्ने ?
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर लगत्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका कर्मचारीहरुको तलब हिमालयन बैंकका कर्मचारी सरह गराउने भित्री सहमती भएको एक सञ्चालकले दाबी गरे । यदि उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने ४ वर्ष हिमालयन बैंकका कर्मचारीहरुको अब तलब बढ्ने छैन । तर, २० देखि २५ प्रतिशत नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने छ भन्दा फरक पर्दैन । किन बोल्दैनन् हिमालयन बैंकको कर्मचारी यूनियन ? के मर्जर गर्दा जे पनि गर्न छुट ? यसको उत्तर अब नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको असहमती ?
कर्मचारी सञ्चयकोषले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसंग मर्जर गर्न नसकिने भन्दै असहमती राख्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले राष्ट्र बैंकलाई पत्र नै पठाएर यस्तो असहमती जनाएको उच्च स्रोतको दाबी छ । मर्जर बारे छानवीन समिति नै बनाएको कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जर भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डर रहेको एक उच्च कर्मचारीले दाबी गरे ।
जे भएपनि मर्जर भाँड्ने हाम्रो तर्क होइन । तर विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मर्जर हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहाना हो । जबरजस्ती राष्ट्र बैंकको निर्देशन विधी विधान विपरित मर्जर हुँदैन । विवाह गर्न दुवै परिवारको सहमती चाहिन्छ गर्भनर साब । हेक्का होस् ।